Maitiro ekudzora kushushikana pamusoro pekudya | Bezzia
Toñy Torres | 07/06/2021 14:00 | Kuderedza uremu, Matipi ehutano
Kudzora kushushikana pamusoro pekudya kunetsekana kwakagovaniswa nevakawanda uye vazhinji. Sezvo, hazvina kunyanya kunetsa kudya zvirinani pachazvo, sekudzivisa kudya zvakanyanya uye kuda kwekuisa chimwe chinhu mumuromo mako. Chinhu chinowanzo kuve chisina hutano uye chikonzero chakakwana chekuparadza chibairo chose chakaitwa Kusvika ikozvino. Zvichida nekuti iwe uchangotanga kudya, nekuti une basa kana rako pachako matambudziko kana chero chikonzero.
Kana iwe uchinetseka nezvekudya uye uchizviziva, chimwe chinhu chakakosha, ino ndiyo nguva yakanaka yekuwana mamwe matipi anozokubatsira kukurira iyo yekukurumidza kuda kudya chinhu chausingafanire. Kunyanya nekuti kana iwe ukarega kushushikana kwako kuchikunda iwe, kakudya kadiki pakati pekudya kunogona kusanduka kuita chidhakwa. Izvo zvinozokutungamira kuti urasikirwe neshungu uye nechido.
1 Kufunganya kudya kuti ungazvidzivirira sei?
1.1 Kudya kwakati wandei zuva rese
1.2 Pickles muvhiniga kutema pakati pekudya
1.3 Chokoreti ine yakakwira cocoa zvemukati
1.4 Gara zvakanaka hydrated
1.5 Rara zvakanaka
2 Shanda iko kuda kudzora kushushikana kwekudya
Kufunganya kudya kuti ungazvidzivirira sei?
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iwe unodya kunze kwekushushikana uye kwete kugutsa chinodiwa chemuviri. Nekuti ipapo chete ndipo paunogona kuisa unoshanda mushonga panguva yakakodzera. Kana iwe uchida kuziva maitiro ekudzora kushushikana kudya, usarasikirwa nemazano anotevera.
Kudya kwakati wandei zuva rese
Iko kudya kakati wandei pazuva kunokubatsira kurasikirwa nehuremu chimwe chinhu chinoratidzwa. Asi kwete izvo chete, kudya chimwe chinhu maawa matatu ega ega kunobatsira iwe kudzora kushushikana kwekudya. Nekudaro, iwe unochengetedza muviri wako kuguta zvakanaka, une simba rekufamba nezuva uye unodzivisa kusvika pakudya kunotevera uine chishuwo chakanyanya. Ehezve, ivo vanofanirwa kugara vachidzorwa mugove, chikafu chakazara kwazvo chamangwanani uye masikati, chidyo chisina mabiko uye zvidyiwa zviviri kana zvitatu pakati pekudya.
Pickles muvhiniga kutema pakati pekudya
Maputuru akadai semapundu muvhiniga, chives, makarotsi kana maorivhi, akakwana pakudya mukati mekudya nekuda kweakaderera macalorie zvemukati. Pakati-masikati kana pamberi pekudya, inogona kuve Starter yakakwana iyo ichakubatsira iwe kudzikisa kuda kwako kudya. Uye zvakare, vhiniga inobatsira kudzora dumbu kushungurudzika, zvakajairika kana uchitanga shanduko mukudya.
Chokoreti ine yakakwira cocoa zvemukati
Imwe yematambudziko makuru nekugadzirisa kunetseka kudya ndeyekuti iwe kazhinji unoshuva chimwe chinhu chinotapira, chisina hutano, uye chakakwira macalorie. Zvisinei, unogona kusarudza zvine hutano senge yakasviba chokoretiEhe, ine cocoa muzana yakakwira kupfuura 75%. Sezvo iri kuvava, zvakaoma kunzwa sekunge uine yakawanda kupfuura ounce kana maviri.
Gara zvakanaka hydrated
Muzviitiko zvakawanda, nzara inovhiringidzwa nenyota, izvo zvinogona kukutungamira kuti udye zvisina musoro pasina kunyatsova nenzara. Kuti udzivise izvi, yeuka hydrate chaizvo mushe mushe. Inwa marita maviri emvura pazuva Uye kana iwe uchinzwa iyo pre-inoshuva bug, iva negirazi remvura uye mirira maminetsi mashoma. Edza kuzvivaraidza nezvimwe zvinhu kuti uropi hwako hugamuchire chiratidzo chekugutsa zvido zvaro.
Zvinoratidzwa kuti vanhu vanorara zvakanaka vane nguva iri nyore yekudzora huremu. Pamusoro pekukosha paku "gadzirisazve" uropi, zorora muviri uye uwanezve simba, Kurara kunokosha kuti urambe uine hutano hwakanaka. Kana iwe usina kugadzikana pamoyo, iwe uri mukana wekunetseka pamusoro pekudya zuva rese
Shanda iko kuda kudzora kushushikana kwekudya
Chinhu chakakosha kwazvo chinowanzo kufuratirwa ibasa remanzwiro rinofanirwa kuitwa usati watanga kudya kwekurema kana shanduko huru yekudya. Kuzvipira kunogona kushanda, zvishoma nezvishoma uye nekuzvidzora maitiro. Semuenzaniso, dzivisa kuzivisa kumhepo ina dzauri pane chikafu. Ziva kuti kune vanhu vane kutarisira, kunoedza kuzvisarudzira kwako.
Gadzira zvinangwa zvako, zvibodzwa zvechokwadi zvaunogona kusangana nazvo munguva pfupi. Zvipe mubayiro nekuzadzisa icho chinangwaZvitengere bhuku, chimwe chinhu chaunoda kuve nacho, asi dzivisa mibayiro inodyiwa. Kana iwe uine simba rekuda, izvo zvidiki zvekubata muchimiro chekudya pavhiki zvichaedza kuzvidzora kwako.
Uye chinonyanya kukosha pazvose, chikafu chinhu chinodiwa. Unofanira kudya kuti uve noutano hwakanaka, kuti uve noutano hwakanaka uye ugone kurarama. Idya zvakanaka uye iwe unogona kudzora kushushikana kudya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Matipi ehutano » Maitiro ekudzora kushushikana pamusoro pekudya
Maitiro ekushongedza mune yeiyo rustic chic maitiro